Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း)
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Progesteroneသည်မျိုးဥကြွေခြင်းနှင့်ဓမ္မတာလာခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအမျိုးသမီးဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သွေးမဆုံးသေးသော်လည်း Progesterone ဟော်မုန်းမရှိခြင်းကြောင့်ဓမ္မတာမလာသောအမျိုးသမီးများတွင်ဓမ္မတာလာစေရန် Progesterone ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင် estrogen ဟော်မုန်းဆေးသောက်သုံးနေရသောသွေးဆုံးပြီးသူအမျိုးသမီးများတွင်သားအိမ်ကိုကာရံထားသောတစ်ရှူးများအလွန်အကျွံပွားလာခြင်းအားကာကွယ်ရန်အတွက်လည်း Progesterone ကိုသုံးနိုင်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအသုံးပြုမှုများအပြင်အခြားသောရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်လည်း Progesterone ကိုအသုံးပြုကောင်း ပြုကြလိမ့်မည်။
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Progesterone ကိုဓမ္မတာလာချိန်အတွင်း၆ရက်မှ၁၂ရက်အထိသာပေးလေ့ရှိသည်။ ဆေးအာနိသင်ထိရောက်မှုရှိစေရန်ဆေးကိုအချိန်မှန်မှန်သောက်ရန်အထူးအရေးကြီးသည်။ ဆေးသောက်ရန်မမေ့ပါစေနှင့်။
Progesterone ကိုရေတစ်ဖန်ခွက်အပြည့်ဖြင့်သောက်ပါ။ လိမ်းဆေးအဖြစ်အသုံးပြုလျှင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာပါ။ ထိုးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါကအသားထိုးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုရပါသည်။ သင့်ဆရာဝန်၊သူနာပြုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတို့ကဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မည်။ အိမ်တွင်ထိုးဆေးကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍သင့်ကိုလိုက်နာအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်းဆရာဝန်ကပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုအသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်များကိုသေချာစွာနားမလည်လျှင် ဖြစ်စေ၊ဆေးမည်သို့ထိုးရမည်ကိုမသိလျှင် ဖြစ်စေ၊တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်ကိုမည်သို့စွန့်ပစ်ရမည်ကိုမသိလျှင်ဖြစ်စေဤဆေးကိုအိမ်တွင်အသုံးမပြုပါနှင့်။
Progesterone ကိုသုံးစွဲနေစဉ်အချိန်အတွင်းသင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့်သင့်အားပုံမှန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆရာဝန်ချိန်းဆိုသောရက်ချိန်းများအတိုင်းမပျက်မကွက်သွားရောက်ပြသပါ။
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Progesteroneကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့Progesteroneကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ရေခဲအောင်သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Progesteroneဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကိုကလေးတွေ၊အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Progesteroneကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။Progesterone ဆေးသောက်သုံးမည်ဆိုလျင်အောက်ပါအခြေအနေများကိုသတိထားသင့်သည်။
Progesterone ဆေးနှင့်သို့မဟုတ်အခြားသောဆေးများနှင့်ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများခံစားရဖူးပါကဆရာဝန်ကိုသေချာစွာအသိပေးပါ(ဆေးသာမကအစားအသောက်၊ဆိုးဆေး၊အစားအစာများကိုတာရှည်ခံအောင်အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်တိရစ္ဆာန်များနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်းများပါအကျုံးဝင်သည်)။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးမဟုတ်ပါကဆေးညွှန်းကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။
ကလေးငယ်များတွင် Progesterone ကိုအသုံးမပြုရပါ။ ဆေး၏အကျိုးအာနိသင်ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်လုံခြုံစိတ်ချရမှုကိုမသိရှိနိုင်ပါ။
လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များအရသက်ကြီးရွယ်အိုများတွင် Progesterone ၏အသုံးဝင်မှုဆေးစွမ်းကိုကန့်သတ်စေမည့် ပြဿနာမရှိသေးပါ။ သို့သော်သက်ကြီးရွယ်အိုများသည်ရင်သားကင်ဆာ၊လေဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သတိမေ့လျော့တတ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရနိုင်ချေများသဖြင့်အသက်ကြီးသူများတွင်Progesterone ကိုအသုံးပြုပါကသတိနှင့်ယှဉ်၍အသုံးပြုရမည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အောက်ပါလက္ခဏာများခံစားရပါက Progesterone သောက်သုံးခြင်းကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးဆရာဝန်နှင့်အမြန်ပြသပါ။
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Progesteroneဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အောက်ဖော်ပြပါဆေးများကိုယေဘုယျအားဖြင့် Progesterone နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလေ့မရှိပါဘူး။ သို့သော်အချို့သောအခြေအနေများတွင်မူသုံးစွဲကောင်းသုံးစွဲပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုသောက်သုံးရန်လိုအပ်ပါကသင့်ဆရာဝန်အနေဖြင့်ဆေးတမျိုးသို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံး၏ပမာဏကို ပြန်လည်ချိန်ဆခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးသောက်ရမည့်အကြိမ်ရေကိုပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Progesteroneကအစားအသောက်ဒါမှမဟုတ်အရက်သေစာနဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့အစားအသောက်၊အရက်သေစာတွေနဲ့ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Progesteroneဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
သိုင်းရွိုက်ဂလင်း ပြဿနာများရှိခြင်း —–>အခြေအနေကိုပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့်သတိထားအသုံးပြုပါ။
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနေရာတွင်အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေအမြဲဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
—->၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကိုအသားထိုးဆေးအဖြစ် ၆ရက်မှ၈ရက်ဆက်တိုက်ထိုးရမည်။ ၄၀၀မီလီဂရမ်ကို သောက်ဆေးအဖြစ် ၁၀ရက်သောက်ရမည်။ (ဆေးထိုးဆေ းသောက်ခြင်းကိုညနေဘက်တွင် ပြုလုပ်ပါ)။
—–>၅ – ၁၀မီလီဂရမ်ကိုအသားထိုးဆေးအဖြစ ၆ကြိမ်ထိုးရမည်။
——>၂၀၀မီလီဂရမ်ကိုသောက်ဆေးအဖြစ် ( ၂၈ရက်ရာသီစက်ဝန်းတိုင်းအတွက် )၁၂ရက်ဆက်တိုက်ပေးရမည်။ (ဆေးသောက်ခြင်းကိုညနေဘက်တွင် ပြုလုပ်ပါ)။
မျိုးပွားအထောက်အကူပြုနည်းလမ်းများ – ဂျယ်လ်ပုံစံ
Progesterone ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သောအမျိုးသမီးများတွင်၈ ရာခိုင်နှုန်းဂျယ်လ်၉၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်တစ်ကြိမ်မိန်းမကိုယ်ကိုလိမ်းပေးရမည်။
အကယ်၍ကိုယ်ဝန်ရှိလာခဲ့လျှင်လည်းဂျဲလ်လိမ်းခြင်းကိုကိုယ်ဝန်၁၀ပတ်သို့မဟုတ်၁၂ပတ်ခန့်အထိ (အချင်းမြဲသည်အထိ) ဆက်လိမ်းပေးရပါမည်။
၁၀၀မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့လျှင်၂ကြိမ်သို့မဟုတ်၃ကြိမ်ထည့်ပေးပါ။ မျိုးဥပြန်လည်ရရှိချိန်မှစပြီးစုစုပေါင်း၁၀ပတ်ခန့်အထိသုံးရပါမည်။ အသက်၃၅နှစ်ထက်ကြီးသောအမျိုးသမီးများတွင်အာနိသင်ထိရောက်မှုရှိမရှိရှင်းလင်းစွာမသိရပါ။ အသက်အရွယ်အလိုက်သုံးသင့်သောဆေးပမာဏကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးပါ။
( National Institute of Child Health and Human Development–NICHD မှလူအယောက်၄၅၉ယောက်တွင်လေ့လာချက်အရ)
ထပ်မံ၍လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းကိုကာကွယ်ရန် : 17-alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) ကိုကိုယ်ဝန်၂၁ပတ်မှစ၍မီးဖွားချိန်အထိသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်၃၆ပတ်အထိတစ်ပတ်လျှင်တခါအသားထိုးဆေးအဖြစ်ထိုးပေးရမည်။
(လူအယောက်၁၄၂ယောက်တွင်လေ့လာချက်အရ) လမစေ့ဘဲမီးဖွားနိုင်ချေများသောအမျိုးသမီးများတွင်ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းကိုလျှော့ချရန် : ကိုယ်ဝန်၂၄ပတ်နှင့်၃၄ပတ်ကြားတွင်၁၀၀မီလီဂရမ်မိန်းမကိုယ်ထည့်ဆေးတောင့်ကိုနေ့စဉ်ထည့်ပေးရမည်။
Catamenial epilepsy (complex partial or secondary generalized motor seizures) အတက်ရောဂါအတွက် : ဓမ္မတာစက်ဝန်း၏ luteal phase (သားဥအိမ်မှမျိုးဥကြွေပြီးချိန် နှင့် ရာသီမလာခင်စပ်ကြား)တွင်အတက်ဝေဒနာပိုခံစားရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍၂၀၀မီလီဂရမ်လျှာအောက်ငုံဆေးပြားကိုတစ်နေ့လျှင်၃ကြိမ်နှုန်းဖြင့်နေ့စဉ်ငုံရမည်။ ရာသီလာနေစဉ်အတက်ဝေဒနာပိုဆိုးသူအမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးကိုရာသီစက်ဝန်း၏၂၃၊၂၄နှင့်၂၅ရက်များတွင်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး luteal phase တစ်လျှောက်လုံးအတက်ဝေဒနာပိုဆိုးသူအမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးကိုရာသီစက်ဝန်း၏၁၅ရက်မြောက်နေ့မှစ၍၂၅ရက်မြောက်နေ့အထိပေးရမည်။
ဖြစ်သင့်သည့်သွေးတွင်း Progesterone ပမာဏမှာငုံဆေးငုံပြီးနောက်လေးနာရီအကြာတွင်5နှင့် 25ng/ml ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ လူနာအားလုံးအနေဖြင့်အတက်ရောဂါအတွက်အသုံးပြုနေသောမိမိအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်ဆေးများကိုလည်းဆက်လက်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။
သွေးဆုံးခါနီးနှင့်သွေးဆုံးချိန်တွင် Progesterone ချို့တဲ့ခြင်းအတွက်
Progesterone ၁.၇ ရာခိုင်နှုန်းခရင်မ်လိမ်းဆေး :လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်သို့မဟုတ်လေးပုံတစ်ပုံခန့်ကိုလက်ဖဝါး၊ခြေဖဝါးသို့မဟုတ်အခြားနူးညံ့သောအရေပြားနေရာများသို့တစ်နေ့လျှင်၁ကြိမ်သို့မဟုတ်၂ကြိမ်လိမ်းပေးပါ။
ကလေးတွေအတွက် Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက်၁၈နှစ်အောက်ကလေးများတွင် Progesterone ၏အာနိသင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတိအကျမသိရှိရပါ။
Progesterone (ပရိုဂျက်စတရုန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Progesteroneကိုသောက်သုံးဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Progesterone. https://www.drugs.com/progesterone.html. Accessed July 26, 2016.